Akụkọ Bible: Ha Nọ na Jeruselem Na-echere - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NDỊ a nọ n’ebe a bụ ụmụazụ Jizọs. Ha erubeworo ya isi ma nọrọ na Jeruselem. Mgbe ha na-echere n’otu ebe, oké ụzụ jupụtara n’ụlọ ahụ ha nọ na ya. Ọ na-ada ka oké ifufe. A malitere ịhụ ire ọkụ n’elu isi onye nke ọ bụla n’ime ndị ahụ na-eso ụzọ. Ị̀ na-ahụ ọkụ ahụ n’elu isi onye nke ọ bụla n’ime ha? Gịnị ka ọ pụtara?
Ọ bụ ọrụ ebube! Jizọs alaghachikwuruwo Nna ya n’eluigwe, ọ na-awụsakwa ndị na-eso ụzọ ya mmụọ nsọ Chineke. Ị̀ ma ihe mmụọ ahụ na-eme ka ha mee? Ha niile malitere ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche.
Ọtụtụ ndị nọ na Jeruselem nụrụ ụzụ ahụ na-ada ka nke oké ifufe, ha wee bịa ịhụ ihe na-emenụ. Ụfọdụ n’ime ha si ná mba ndị ọzọ, ha bịara maka ememe ndị Izrel bụ́ Pentikọst. Lee ihe ijuanya ndị ahụ bịara abịa nwere! Ha nụrụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ekwu okwu n’asụsụ ha banyere ihe ndị dị ebube Chineke meworo.
Ndị ọbịa ahụ sịrị: ‘Ndị a niile bụ ndị Galili. Olee otú ha sizi nwee ike ikwu okwu n’asụsụ ndị a dị iche iche a na-asụ n’ala niile ebe anyị si bịa?’
Pita wee guzoo ọtọ iji kọwaara ha ihe kpatara ya. O welie olu ya gwa ha ụzọ e si gbuo Jizọs, na otú Jehova si mee ka o si n’ọnwụ bilie. ‘Jizọs nọ n’eluigwe ugbu a n’aka nri Chineke,’ ka Pita gwara ha. ‘Ọ wụsawokwa anyị mmụọ nsọ ahụ o kwere anyị ná nkwa. Ọ bụ ya mere unu ji na-anụ ma na-ahụ ọrụ ebube ndị a.’
Ma mgbe Pita na-ekwu ihe ndị a, ọtụtụ n’ime ndị ọ na-agwa okwu nwere mwute banyere ihe e mere Jizọs. Ha jụrụ, sị: ‘Gịnị ka anyị ga-eme?’ Pita sịrị ha: ‘Ọ dị mkpa ka unu gbanwee omume unu ma mee baptizim.’ N’ihi ya, n’ụbọchị ahụ, ihe dị ka puku mmadụ atọ mere baptizim, ha ewee ghọọ ụmụazụ Jizọs.
Dị ka anyị na-ahụ na foto a, gịnị mere ụmụazụ Jizọs, bụ́ ndị nọ na Jeruselem na-echere?
Olee ihe juru ndị bịara na Jeruselem anya?
Gịnị ka Pita kọwaara ndị ahụ bịara na Jeruselem?
Olee mmetụta ndị ahụ nwere mgbe ha gesịrị Pita ntị, gịnịkwa ka ọ gwara ha ka ha mee?
Ọ̀ bụ mmadụ ole ka e mere baptizim n’ụbọchị Pentikọst nke afọ 33?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 2:1-47.
Olee otú ihe Pita kwuru n’Ọrụ Ndịozi 2:23, 36 si egosi na mba ndị Juu dum so kpata ọnwụ Jizọs? (1 Tesa. 2:14, 15)
Olee otú Pita si setịpụ ezi ihe nlereanya n’ịtụgharị uche n’Akwụkwọ Nsọ? (Ọrụ 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kọl. 4:6)
Olee otú Pita si jiri nke mbụ n’ime “mkpịsị ugodi nke alaeze eluigwe,” nke Jizọs kwere nkwa inye ya, mee ihe? (Ọrụ 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)